KEDU IHE MERE NA ENWEGHI ỤDA NA KỌMPỤTA AHỤ? NWEGHACHI ỤDA PCPRO100.INFO - ỤDA - 2019
Isiokwu a, dabere na ahụmahụ onwe onye, ​​bụ ụdị nchịkọta ihe kpatara ya nke ụda ọ bụla nwere ike isi na kọmputa. Ọtụtụ n'ime ihe ndị kpatara ya, n'ụzọ, nwere ike iwepụ onwe gị kpam kpam! Iji malite, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị na ụda ahụ nwere ike ịkwụsị maka ngwanrọ na ngwaike. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịlele arụmọrụ nke ndị ọkà okwu na kọmputa ọzọ ma ọ bụ ngwa ọdịyo / vidiyo. Ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ na enwere ụda, mgbe ahụ ọ ga-abụ na e nwere ajụjụ banyere software nke akụkụ kọmputa (ma maka nkọwa ndị ọzọ na nke a).
6 ihe mere na enweghi ụda
1. Ndị na-anaghị arụ ọrụ (na-ehulata ma na-agbaji ụdọ)
2. Ebere ụda na ntọala.
3. Ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọ ala kaadị
4. Ọ dịghị ihe ndekọ / video codecs
5. Hazie ahazi Bios
6. Virus na adware
7. Mweghachi ụda ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na-enyere aka
Nke a bụ ihe mbụ ị ga-eme mgbe ị na-ede ụda na ndị ọkà okwu na kọmputa gị! Mgbe ụfọdụ, ị maara na e nwere ihe ndị dị otú a: ị bịara inyere onye aka dozie nsogbu ahụ na ụda, ọ gbakwara echezọ banyere wires ...
Ọzọkwa, ma eleghị anya, i jikọtara ha na ntinye na-ezighị ezi. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ntinye na kaadị ụda nke kọmputa: maka igwe okwu, maka ndị ọkà okwu (ekweisi). Na - emekarị, maka igwe okwu, mmepụta ahụ bụ pink, maka ndị ọkà okwu - akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Lezienụ anya na nke a! Ọzọkwa, ebe a bụ ntakịrị isiokwu banyere njikọ nke ekweisi, n'ebe ahụ a na-agbasasị nsogbu ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Fig. 1. Ụdọ maka okwu ọnụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na ọnụ ụzọ ahụ dị oke nká, ọ dị ha mkpa ka a dọọ ha mfe: wepu ma weghachite. I nwekwara ike idozi kọmputa site na uzuzu n'otu oge.
Rịba ama ma ha nwere ogidi ha. Na n'ihu ọtụtụ ngwaọrụ, ị nwere ike ịhụ obere ọkụ nke na-egosi na ndị ọkà okwu jikọtara na kọmputa.
Fig. 2. A na-agbanyụ ndị ọkà okwu a, n'ihi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọkụ na ngwaọrụ ahụ dị.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị gbakwunye ụda ruo n'ogo kachasị na ndị ọkà okwu, ị nwere ike ịnụrụ ụdị "njiri". Lezienụ anya na ihe a niile. N'agbanyeghi na obu ihe ndi ozo, na otutu okwu, nsogbu di na nke a ...
Ihe nke abụọ ị ga - eme bụ ịlele ma ọ bụrụ na ihe niile dị na ntọala kọmputa, ọ ga - ekwe omume na Windows na a na - agbanye ụda ka ọ bụrụ nke kachasị ma ọ bụ gbanyụọ na nchịkwa nchịkwa nke ngwaọrụ dị mma. Ikekwe, ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ka ọ dị ntakịrị, ụda dị - ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-adịghị anụ ya.
Anyị na-egosi ọnọdụ na ihe atụ nke Windows 10 (na Windows 7, 8 ihe niile ga-abụ otu).
1) Mepee ogwe ntụpọ, wee gaa na mpaghara "akụrụngwa na ụda."
2) Ọzọ, mepee "ụda" ụda (lee fig 3).
Fig. 3. Ngwa na ụda
3) Ị ga-ahụ ngwaọrụ ngwaọrụ (gụnyere ndị ọkà okwu, ekweisi) jikọọ na kọmputa gị na taabụ "ụda". Họrọ ihe omuma choro ma kpoo ha (lee fig 4).
Fig. 4. Njirimara Nkwupụta (Ụda)
4) Na akpa taabụ nke meghere n'ihu gị ("izugbe"), ịkwesịrị ile anya nke ọma n'ihe abụọ:
- ngwaọrụ ahụ ọ kwadoro?, ma ọ bụrụ na - ịchọrọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ya. Ọ bụrụ na ha anọghị ebe ahụ, jiri otu n'ime ọrụ ndị ahụ iji chọpụta àgwà nke kọmputa ahụ, ọrụ ahụ n'otu oge ahụ ma kwado ebe ị ga-ebudata ọkwọ ụgbọala dị mkpa;
- lee ala ala windo, ma ọ bụrụ na ngwaọrụ agbanwuru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, jide n'aka na ịgbanyere ya.
Fig. 5. Ndị na-ekwu okwu Njirimara (ekweisi)
5) Na-emechi windo ahụ, gaa na "taabụ" taabụ. Lee oke ọkwa, kwesịrị ịbụ karịa 80-90%. Dịkarịa ala ruo mgbe ị nwetara ụda, wee dezie ya (lee fig 6).
Fig. 6. Ibu olu
6) Na taabụ "Di elu" enwere bọtịnụ pụrụ iche maka ịlele ụda - mgbe ịpị ya, ị ga-egwu obere ụda (5-6 sekọnd). Ọ bụrụ na ịnweghị ya, gaa na ihe ọzọ, chekwaa ntọala.
Fig. 7. Nyocha ụda
7) Ịnwere ike, site n'ụzọ, banyeghachi "ogwe akara / ngwa na ụda" ma mepee "ntọala ọkwa", dị ka egosiri na fig. 8
Fig. 8. Mgbanwe nke olu
N'ebe a, anyị nwere mmasị na ya, ma ọ bụghị ma ụda ahụ dị ntakịrị. Site n'ụzọ, na taabụ a, ị nwere ike gbanwee ụda, ọbụna otu ụdị, ọmụmaatụ, ihe niile a na-anụ na Firefox nchọgharị.
Fig. 9. Mpịakọta na mmemme
8) Na nke ikpeazụ.
N'elu aka nri ala (na-esote elekere) enwerekwa ntọala olu. Lelee ma ọkwa ọkwa nkịtị dị n'ebe ahụ ma ọ bụrụ na agbanyụ okwu adịghị agbanyụ, dika dị na foto dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, ịnwere ike ịga ụkwụ 3.
Fig. 10. Gbanwee olu na kọmputa.
Ọ dị mkpa! Na mgbakwunye na ntọala nke Windows, jide n'aka na ị ga-ege ntị n'olu ndị ọkà okwu n'onwe ha. Ma eleghị anya, onye na-achịkwa ya bụ nke kacha nta!
Ọtụtụ mgbe, kọmputa nwere nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọala maka vidio na kaadị mma ... Nke a mere, nzọụkwụ nke atọ iji weghachite ụda bụ ịlele ndị ọkwọ ụgbọala. O nwere ike ịbụ na ị chọpụtalarị nsogbu a na nkwụzọ gara aga ...
Iji chọpụta ma ọ bụrụ na ihe niile dị na ha, gaa na njikwa ngwaọrụ. Iji mee nke a, mepee ogwe ntụle ahụ, wee mepee taabụ "Akụrụngwa na ụda," wee malitezie onye njikwa ngwaọrụ. Nke a bụ ụzọ kachasị ọsọ (lee fig 11).
Fig. 11. Ngwa na ụda
Na njikwa ngwaọrụ, anyị nwere mmasị na taabụ "Ụda, egwuregwu na ngwaọrụ vidio". Ọ bụrụ na ị nwere kaadi dị mma ma ejikọ ya: ebe a ka a ga-egosipụta ya.
1) Ọ bụrụ na egosipụtara ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ na-acha odo odo (ma ọ bụ ọbara uhie) na-ada n'ihu ya, ọ pụtara na onye ọkwọ ụgbọ ala adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na esighi ya arụ ọrụ. N'okwu a, ịkwesịrị ibudata ụdị ọkwọ ụgbọala ịchọrọ. Site n'ụzọ, enwere m mmasị iji usoro Everest - ọ ga-egosi ọ bụghị naanị ụdị ngwaọrụ nke kaadị gị, kamakwa ị ga-agwa ebe ị ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka ya.
Ụzọ dị mma iji melite na ịlele ndị ọkwọ ụgbọala bụ iji ọrụ ndị dị na nwelite aka ma chọpụta ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaike ọ bụla na PC gị: Ana m akwado ya!
2) Ọ bụrụ na e nwere kaadi dị mma, ma Windows adịghị ahụ ya ... Ihe ọ bụla nwere ike ịbụ ebe a. O kwere omume na ngwaọrụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ na ị jikọtara ya na ya. Ana m ebu ụzọ chebe kọmputa site n'ájá, ka mịpụ oghere ahụ, ma ọ bụrụ na ịnweghị kaadi dị mma. N'ozuzu, n'ọnọdụ a, nsogbu ahụ nwere ike ịnweta na ngwanrọ kọmputa (maọbụ na ngwaọrụ agbanyụrụ na Bios, oh Bos, lee n'okpuru ebe a).
Fig. 12. Onye njikwa ngwaọrụ
Ọ dịkwa mkpa imelite ndị ọkwọ ụgbọala gị ma ọ bụ wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị iche iche: okenye, ma ọ bụ karịa. Ọ na-emekarị na ndị mmepe enweghi ike ịhụ ihe nhazi niile nke kọmputa na ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala na usoro gị na-arụrịta ụka.
Ọ bụrụ na ị gbanye kọmputa ahụ, ị ​​nwere ụda (ịnwere ike ịnụrụ ekele Windows, dịka ọmụmaatụ), na mgbe ị gbanyere ụfọdụ vidiyo (AVI, MP4, Divx, WMV, wdg), nsogbu ahụ dị na vidiyo, ma ọ bụ na codecs, ma ọ bụ na faịlụ n'onwe ya (ma eleghị anya ọ merụọ, gbalịa mepee faịlụ vidiyo ọzọ).
1) Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọkpụkpọ vidiyo - mkwado ka ị wụnye onye ọzọ ma gbalịa ya. Dịka ọmụmaatụ, ọkpọkọ KMP na-enye nsonaazụ dị mma. O nwere ugbua nwere koodu nke e dere na nke kachasị mma maka ọrụ ya, ekele nke ọ ga-emeghe ọtụtụ faịlụ vidio.
2) Ọ bụrụ na nsogbu nwere codecs, enwere m ndụmọdụ ka ị mee ihe abụọ. Nke mbụ bụ iwepụ codecs ochie gị site na usoro ahụ.
Nke abụọ, wụnye setịpụ nke codecs - K-Lite Codec Pack. Mbụ, ngwugwu a nwere ngwa ngwa na ngwa ngwa Media Player, nke abuo, a ga-arụnye codecs kachasị ewu ewu, bụ nke meghere vidio na ọkpụkpọ kachasị ewu ewu.
Otu ihe gbasara K-Lite Codec Pack codecs na nhazi ha kwesịrị ekwesị:
Site n'ụzọ, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị iji wụnye ha, ma iji wụnye ha n'ụzọ ziri ezi, ya bụ. zuru ezu. Iji mee nke a, ibudata setịpụ zuru ezu na mgbe echichi, họrọ mode "Nhọrọ nke Ihe" (maka nkọwa ndị ọzọ na nke a na edemede gbasara codecs - njikọ dị n'elu).
Fig. 13. Hazie codecs
Ọ bụrụ na ị nwere igbe dị n'ime ya, lelee ntọala BIOS. Ọ bụrụ na agbanyere ngwaọrụ ụda na ntọala ahụ, ọ gaghị ele anya na ị ga-enwe ike ime ka ọ rụọ ọrụ na Windows OS. N'ikwu eziokwu, ihe kpatara nsogbu a bụ n'ihi na Site na ndabara na ntọala BIOS enwere kaadị kaadị.
Iji tinye ntọala ndị a, pịa bọtịnụ F2 ma ọ bụ Del (dabere na PC) mgbe ịgbanyere kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye, gbalịa na-elele bọtịnụ kọmputa ahụ ozugbo ịgbanyere ya, lebakwuo anya. A na-edekarị bọtịnụ na ya iji tinye Bios.
Dịka ọmụmaatụ, a gbanwere kọmputa ACER - bọtịnụ DEL e dere n'okpuru ebe a - ịbanye Bios (lee ọgụgụ 14).
Ọ bụrụ na i nwere ihe isi ike ọ bụla, ana m atụ aro ịgụ akwụkwọ m banyere otu esi abanye Bios:
Fig. 14. Bios Nbanye bọtịnụ
Na Bios, ịkwesịrị ịchọ eriri nke nwere okwu ahụ bụ "mejupụtara".
Fig. 15. Ndị na-ahụ maka olulu mmiri
Na ndepụta ị chọrọ ịchọta ngwaọrụ ọdịyo gị wee hụ ma ọ bụrụ na agbanyere ya. Na onu ogugu 16 (n'okpuru) a na enyere ya aka, ma oburu na i nwere "onye nkwaruru" n'iru gi, gbanwee ya na "Kwadoro" ma obu "Nchekwa onwe".
Fig. 16. Kwado AC97 Audio
Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike ịpụ Bios site na ịchekwa ntọala ahụ.
Ebee ka anyị na-enweghị nje ... Karịsịa ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha nwere ọtụtụ na ha amaghị ihe ha nwere ike ime ma ọlị.
Nke mbụ, gee ntị na ọrụ nke kọmputa dị ka dum. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-emekarị ka ọ ghara ime, nje ahụ na-egbochi nje virus, "mgbagwoju anya" ahụ na-acha anụnụ anụnụ. Ikekwe ị nwere nje, ọ bụghị naanị otu.
Nhọrọ kacha mma ga-abụ ịlele kọmputa gị maka nje virus na ụfọdụ antivirus nke oge a na ebe nchekwa data dị. N'ime otu n'ime isiokwu ndị mbụ, enyere m aka maka mmalite nke 2016.:
Site n'ụzọ, DrWeb CureIt antivirus na-egosi nsonaazụ dị mma, ọ dịghị ọbụna mkpa iji wụnye ya. Naanị ibudata ma lelee.
Nke abuo, Ana m akwado ịlele kọmputa gị na diski akpa mberede ma ọ bụ flash drive (nke a na-akpọ CD Live). Onye ọ bụla na-ahụtụbeghị, m ga-asị: dị ka a ga - asị na ị na-ebufu usoro ọrụ arụmọrụ nwere ngwa ngwa na antivirus site na CD (flash drive). Site n'ụzọ, ọ ga-ekwe omume na ị ga-enweta ụda n'ime ya. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-abụ na ị nwere nsogbu na Windows na ị nwere ike ịnyeghachi ya ...
Lee m ga-enye ụfọdụ ndụmọdụ, ma eleghị anya ha ga-enyere gị aka.
1) Ọ bụrụ na ị nwere ụda n'ihu, ma ugbu a, i mebeghị, ị nwere ike itinyela ụfọdụ mmemme ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala nke mere ka esemokwu ngwaike. Ọ bụ ihe ezi uche dị na nhọrọ a iji gbalịa iweghachi usoro.
2) Ọ bụrụ na e nwere ọkwa ọzọ ma ọ bụ ndị ọzọ okwu, gbalịa jikọta ha na kọmputa ma weghachite ndị ọkwọ ụgbọala maka ha (wepụ ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ ochie ị kwụsịrị na usoro ahụ).
3) Ọ bụrụ na isi ihe niile gara aga enyereghị gị aka, ị nwere ike weghachite usoro Windows 7. Mgbe ahụ wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ụda apụta na mberede - jiri nlezianya lelee ya mgbe usoro ọ bụla awụnyere. O yikarịrị ka ị ga-ahụ ozugbo onye ahụ mebiri emebi: onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ihe omume nke na-esemokwu na mbụ ...
4) N'aka nke ọzọ, jikọọ ekweisi kama ikwu okwu (ọkà okwu kama ikweisi). Ikekwe ị ga-akpọtụrụ onye ọkachamara ...
https://termotools.com ig.termotools.com © Ụda 2019